Global Voices teny Malagasy » Noteren’ny fihetsiketsehana, nampitomboin’ny governemanta Boligara ny famatsiam-bola amin’ny fitsaboana ankizy · Global Voices teny Malagasy » Print
Noteren'ny fihetsiketsehana, nampitomboin'ny governemanta Boligara ny famatsiam-bola amin'ny fitsaboana ankizy
Voadika ny 02 Mey 2018 19:06 GMT 1	 · Mpanoratra Nevena Borisova Nandika Miranah
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Bolgaria, Fahasalamàna, Mediam-bahoaka, Zon'olombelona
Ankizy mandihy ao an-tanànan'i Zimitsa, Bolgaria tamin'ny taona 2011. sarin'ny Tafik'i Etazonia  avy amin'i Maj. M. B. Gorospe, Azon'ny rehetra ampiasaina.
Miharihary ny fepetra fadiranovana eo amin'ny fitsaboana ny ankizy ao Bolgaria taorian'ny fampitandremana nataon'ny filohan'ny departemantan'ny fandidiana ao amin'ny hopitalin-jazakely fitsaboana aretim-po ao Sofia fa mety ho voatery hikatona ity hopitaly ity.
Namoaka ny fampitandremany  tamin'ny fiandohan'ny taona 2018 ny Dr. Stoyan Lazarov, noho ny tsy fahampian'ny mpiasan'ny fitsaboana. Nanaitra ireo ray aman-dreny manan-janaka tsaboina ao amin'ny hopitaly izany, ka nanangana pejy Facebook antsoina hoe “Andeha ampiana ny hopitaly tsara indrindra fitsaboana aretim-po ho an'ny ankizy eto amin'ny Balkana” izy ireo ary nanomboka nanao fihetsiketsehana. 
Namoaka taratasy misokatra  ho an'ny filoha Boligara tao amin'ilay pejy Facebook izy ireo:
Izahay, ray aman-dreny, olon-dehibe manana olana ara-pahasalamana manaranaka momba ny fò sy olona akaiky ireo ankizy manana olana momba ny fò dia miantso anao handray fepetra, mba tsy hamela ny hopitaly fitsaboana fo ho an'ny ankizy, sampan'ny hopitalim-panjakana fitsaboana fo, tsy hiasa intsony. Ity no hany toerana hitsaboana ireo ankizy teraka manana tsy fetezana eo amin'ny fo eto Bolgaria. Mandray marary manerana ny firenena, 24 ora isan'andro ny hopitaly. Raha ny tahiry isan-taona, fitsaboana sy fandidiana fo 400 no tontosaina amin'ny ankizy vao teraka hatramin'ny 18 taona. Didiana izy ireo ary velona soa aman-tsara ao amin'ny toeram-pitsaboana ary araha-maso hatrany.
Pikantsarin'ny pejy Facebook “Andao avotana ny hopitaly tsara indrindra fitsaboana fo ho an'ny ankizy eto Balkan”.
Niezaka nampiasa fitaovana antserasera hafa ny olom-pirenena voakasika mba hanao fanentanana, saingy voafetra ny fahombiazana. Ohatra, olona 1.443 ihany no nanasonia ity fanangonan-tsonia  navezivezy tao amin'ny Facebook ity, na dia teo aza ny antso tahaka ity  avy amin'ilay mpisera antsoina hoe Julia Raicheva:
Aza avela hitranga izany! Harenan'ny firenena manontolo ny zanatsika sy ny tanorantsika! Andeha hanohana ireo dokotera sy mpanampy mpitsabo, izay manavotra ny ain-janatsika.
Ho setrin'ny fanambaran'i Lazarov, mitady hanifika ny tsiny  ho any amin'ny fitantanana ny hôpitaly ny minisitra lefitry ny fahasalamana, Zheni Nacheva. Namaly ny talen'ny hôpitaly, Anna Kaneva, tamin'ny filazana fa “somary tafahoatra” ny fanambaran'i Lazarov ary “mampalahelo” ny fiampangana ataon'ny minisitra lefitra.
Tsy fahampian'ny dokotera, fitsaboana tsy ampy ho an'ny ankizy, ary hôpitaly bokan-trosa
Na dia izany aza, tsy irery ny hôpitaly amin'ny tolona ataony.
Tamin'ny taona 2015, eo amin'ny 6,6 amin'ny zazakely 1.000 no maty am-piterahana tany Bolgaria, araka ny filazan'ny Fikambanana ho an'ny Fiarahamiasa sy Fampandrosoana Ara-toekarena (OECD) fanta-daza amin'ny tontolon'ny fahasalamana ao Bolgaria . 80 isanjato mihoatra noho ny tahan'ny ao amin'ny Vondrona Eoropeana 3,6 amin'ireo zazakely 1.000 izany.
Nampiseho ihany koa ny fanadihadian'ny OECD fa ao amin'ny faritra provinsialy, in'efatra hatramin'ny in'enina avo heny noho ny any an-drenivohitra ny taham-pahafatesan'ny zazakely, ary mitranga amin'ny fotoana alohan'ny hiterahana ny 72 isanjaton'ny fahafatesan'ny zazakely amin'ny ankapobeny (izany hoe fotoana fohy alohan'ny ahaterahana, mandritra ny fahaterahana na hatramin'ny herinandro aorian'ny fahaterahana) na noho ny tsy fetezan'ny zazakely tany am-bohoka, ary iray amin'ireo tranga tsaboina ao amin'ny hopitalin-jaza fitsaboana fo izany.
Bolgaria, izay manana mponina 7 tapitrisa, dia manana mpitsabo mpandidy ankizy 10 monja, ary mpitsabo ankizy 400 no ilaina amin'izao fotoana izao mba hamenoana ny tsy ampy . Mitaraina noho ny tsy fisian'ny mpanampy mpitsabo ao amin'ny sampana mila fitsaboana haingana ireo mpitsabo fo ao amin'ny sampana fitsaboana ankizy. Olana hafa ny fitomboan'ny taonan'ireo dokotera: maro no efa 55 taona mahery ary mbola miasa na dia tokony efa misotro ronono aza izy ireo.
Raha ny momba ireo neonatolojista , na dokotera manokana mitsabo zaza vao teraka, indrindra ireo marary na teraka tsy tonga volana, mihoatra ny 50 taona ny ankamaroan'ireo miasa any amin'ny hopitaly lehibe ao amin'ny firenena, araka ny fijoroana vavolombelona nandritra ny dinika parlemantera ambany tafontrano  momba ny fitsaboana zaza tamin'ny taona 2017. Tsy manana neonatologista mihitsy ireo hôpitaly madinika ao Bolgaria. Tsy mahasarika tanora hiasa ivelan'ny tanàna lehibe ny hôpitaly, ary tanora maro no maniry hiasa any amin'ny hôpitaly tsy miankina fa tsy any amin'ny toeram-pitsaboana ara-panjakana.
Olana ny tsy fisian'ny famatsiam-bola. Tobim-pahasalamana monisipaly Boligara miisa 150, sy hopitaly 20 no nakatona nandritra ny folo taona farany noho ny tsy fahampian'ny vola, araka ny lahatahirin'ny Sendikan'ny Hôpitaly Monisipaly. Hôpitaly 31 no manana olana ara-bola goavana, anisan'izany ny 10 izay tsy afaka mandoa karaman'ny mpiasa noho ny trosa.
Ao an-tanànan'i Dimitrovgrad, ohatra, tsy nahazo ny karamany feno nandritra ny roa taona misesy ny mpiasa. Na dia any Sofia aza, miatrika fanakatonana ny sampana fitsaboana manokana ho an'ny vehivavy (gynekôlôgy) ao amin'ny Hopitaly Maroendrika Faharoa. Gynekôlôgy 8 monja sy manam-pahaizana momba ny neônatôlôjia iray ihany no ao amin'ny hopitaly.
Tamin'ny janoary 2018, nikarakara fihetsiketsehana  ny sendikan'ny Hopitaly Monisipaly ao Bolgaria mba hanohitra ny “fanimbàna ny toeram-pitsaboana monisipaly tao anatin'ny taona vitsivitsy sy ny tsy fahampian'ny fepetra fanavotana sahaza.”
Fandresena kely, saingy ilaina ny fanovàn-drafitra
Ho an'ny taona 2018, na dia izany aza, nanome famatsiam-bola teo amin'ny 285 tapitrisa lev boligara (146 tapitrisa euros) hitsaboana ankizy ny fanjakana, na eo amin'ny 12% amin'ny tetibolan'ny Tahirim-bola Fiantohana ny Fahasalamana ao amin'ny Firenena mitentina 2,4 miliara lev boligara izany, tarehimarika (vola) izay voatsikera fa ambany loatra.
Ho setrin'ny fihetsiketsehana sy ny olana ara-bola goavana eny amin'ny hopitaly, nampian'ny minisiteran'ny fahasalamana 150 tapitrisa (77 tapitrisa euros) tamin'ny volana Febroary 2018 ny famatsiam-bola ho an'ny clinical pathways  [toeram-pitsaboana eny ifotony?]—fitaovana lehibe indrindra nampiasaina hitantanana ny kalitaon'ny fitsaboana sy hanatsarana ny vokatra ara-pahasalamana. Nampiana  400 tapitrisa (200 tapitrisa euros) ny tetibolam-panjakana ankapobeny ho an'ny fahasalamana. Nampitombo atsasany ny isan'ny [toeram-pitsaboana eny ifotony?] izany, indrindra ho an'ny fitsaboana ankizy sy ny fitsaboana havokavoka, ary ny fitsaboana ho an'ny vehivavy, ny hozatra ary ny tsy fetezana hatrany am-bohoka.
Amin'izao fotoana izao farafaharatsiny, heverina fa fandresena ho an'ny fitsaboana ankizy ireo fepetra ireo. Saingy mbola hifantarina raha ampy hahatonga ny hopitaly hiasa araka ny tokony izy ny fanomezana famatsiam-bola vaovao. Nisy ireo olona nitsikera ny fepetra vaovao ho tsy ampy sy miteraka fandrahonana ho an'ny hopitaly sasany ao amin'ny faritany.
Nilaza ny minisitry ny fahasalamana ao Bolgaria, Kiril Ananiev, na dia izany aza, fa na dia eo aza ny fampitomboana ny famatsiam-bola, raha tsy misy ny fanovan-drafitra, tsy ho tratra ny fanatsarana ilaina. Nilaza  i Ananiev fa vonona hiandraikitra amin'ny fanolorana maodely vaovao ho entina hodinihin'ny ankolafy rehetra izy.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/05/02/118119/
 “Andeha ampiana ny hopitaly tsara indrindra fitsaboana aretim-po ho an'ny ankizy eto amin'ny Balkana” : https://www.facebook.com/%D0%94%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-215549755125891/?hc_ref=ARQj-1Q1S7LAFnAHFMCxZLdcX5zLWwEtDT5g8YPOlsL7KBLxtnVs5n4zjK9QWgRxhIE
 taratasy misokatra: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1992363124111203&id=215549755125891
 ity fanangonan-tsonia: https://www.peticiq.com/196785
 hanifika ny tsiny: https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/zam-ministr-zheni-nacheva-klinikata-po-detska-kard/
 fanta-daza amin'ny tontolon'ny fahasalamana ao Bolgaria: http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/2017_9789264285071-bg
 manana mpitsabo mpandidy ankizy 10 monja, ary mpitsabo ankizy 400 no ilaina amin'izao fotoana izao mba hamenoana ny tsy ampy: http://www.mediapool.bg/pediatriyata-u-nas-e-v-tezhka-finansova-i-kadrova-kriza-news270743.html
 dinika parlemantera ambany tafontrano: http://www.redmedia.bg/statii/detskata-smartnost-v-selata-e-s-40-procenta-po-visoka-ot-gradovete-3701
 clinical pathways: https://en.wikipedia.org/wiki/Clinical_pathway